Zlatan Ibrahimovic dib haddana ugu laabtay dalka Talyaaniga.
Loading...	Home Wararka Zlatan Ibrahimovic dib haddana ugu laabtay dalka Talyaaniga.
Zlatan Ibrahimovic dib haddana ugu laabtay dalka Talyaaniga.	Monday, 30 August 2010 22:05	Iyada oo ay ka soo wareegtay muddo hal xilli ah oo uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona, ayuu Zlatan Ibrahimovic dib haddana ugu laabtay dalka Talyaaniga.
Isagoona maalintii Sabtida uu shaaciyay madax-weeyne ku xigeenka kooxda Milan, uuna mulkida u leeyahay hogaamiyaha talyaaniga Silvio Berlusconi, Adriano Galliani inuu cayaar-yahanku u soo safan doono kooxda Milan. Milan ayaa ku iibsatay Zlatan Ibrahimovic dhaqaale gaarsiisan 75 malyuun oo koronka iswiidhishka sannadkiiba muddo saddex sannadood gaareeysa.
Maanta oo isniin ah ayuu cayaar-yahanku mari doonaa baaritaan caafimaad kadibna uu qalinka ku duugi doonaa heshiis afar sannadood ah.